PIEPS DSP — स्वैच्छिक उत्पादन सुधार कार्यक्रम I Pieps.com
विनिमय सेवाउत्पादन इन्फोFAQसम्पर्क
PIEPS ले एक स्वैच्छिक उत्पादनको घोषणा गर्दछउत्पादन सुरक्षा बढाउन सुधार कार्यक्रमयसको DSP हिमस्खलन ट्रान्सिभरहरूको
PIEPS ले आन्तरिक र तेस्रो-पक्ष परिक्षणसहित प्रभावित उत्पादनहरूको सुरक्षा र प्रदर्शनको बिस्तृत मूल्यांकन गरेको छ। परिणामहरूले निष्कर्ष दिन्छन् कि उत्पादनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना गर्दछन्, राम्ररी डिजाइन गरिएका छन्, र इरादाको रुपमा प्रदर्शन गर्दछन्।
DSP हिमस्खलन ट्रान्सिभरहरूको स्वैच्छिक उत्पादन सुधार कार्यक्रम
PIEPS ले यसको DSP हिमस्खलन ट्रान्सिभरहरूको लक र स्वीच संयन्त्रलाई राम्रो सुरक्षा गर्न स्वैच्छिक उत्पादन सुधार कार्यक्रमको घोषणा गर्दछ। सुधारमा नयाँ हार्डकेस बोक्ने प्रणाली हुन्छ जुन DSP PRO, DSP PRO ICE र DSP SPORT हिमस्खलन ट्रान्ससिभरहरूलाई प्रयोग गर्नु अघि “सेन्ड” मोडमा सेट गरिएका छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नको लागि हो। यो नयाँ हार्डकेस बोक्ने प्रणालीले नियोप्रिन बोक्ने प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्दछ, त्यो DSP हिमस्खलन ट्रान्सिभरहरूसँग आपूर्ति गरिएको थियो, जुन अहिले खारेज गर्नुपर्नेछ। प्रभावित DSP उत्पादनहरू सन् 2013 र 2020 को बिचमा निर्मित गरिएका थिए।
PIEPS ले DSP PRO, DSP PRO ICE र DSP SPORT हिमस्खलन ट्रान्सिभरहरूसँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरू प्राप्त गरेको छ। यिनी सबै मोडेलहरूले उत्पादनलाई “सेन्ड” मोडमा सेट गर्न एक समान यांत्रिक लक-र-स्विच संयन्त्रको प्रयोग गर्दछन्। हामी विश्वास गर्छौं कि यी जिज्ञासाहरू दुई हिमस्खलन दुर्घटनाहरूद्वारा प्रेरित गरिएको थियोः एउटा सन् 2017 मा र अर्को सन् 2020 को वसन्तयाममा। यिनी दुर्घटनाहरूपछि, त्यहाँ आरोपहरू थिए कि सुरक्षा ताला / DSP PRO / SPORT को स्विच संयन्त्र हिमस्खलनहरूको समयमा खराबी भएको थियो। यद्यपि परीक्षणहरूले देखाएको छ कि DSP PRO, DSP PRO ICE र DSP SPORT मा लक / स्विच संयन्त्रले सबै प्रासंगिक सुरक्षा मापदण्डहरू पूरा गर्दछ।
PIEPS उत्पादन सुरक्षा र यसका प्रयोगकर्ताहरूप्रति प्रतिबद्ध छ, र यसको सबै ब्याककन्ट्री उत्पादनहरूमा कठोर उत्पादन उत्कृष्टता कायम राख्दछ।
हाम्रो उत्पादनहरूमा उपभोक्ता विश्वास सर्वोपरि छ, जुन किनकि PIEPS R&D टोलीले अहिले सबै DSP ट्रान्सिभरहरूको लागी एक नयाँ हार्डकेश बोक्ने प्रणालीको विकास गरेको छ, DSP ट्रान्सिभरहरूसँग आपूर्ति गरिएको नियोप्रिन बोक्ने प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्नको लागी। नयाँ हार्डकेस बोक्ने प्रणालीको डिजाईनले ट्रान्ससीभरहरू “सेन्ड” पोजिसनमा प्रयोग भएको बेलामा लक भएको सुनिश्चित गर्न अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान गर्दछ, र सुरक्षित रूपमा प्रयोगको समयमा “सेन्ड” पोजिसनमा रहनुहोस्। हामीले हार्डकेस बोक्ने प्रणालीलाई एक “खेल परिवर्तक” ठान्दछौं जसले सबै प्रयोगकर्ताहरूको लागि सुरक्षा र DSP ट्रान्ससीभरहरूको कार्यक्षमता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ।
उपभोक्ताहरूले तुरून्त DSP ट्रान्ससीभरहरूको प्रयोग रोक्नुपर्छ र नयाँ हार्डकेस बोक्ने प्रणालीको लागि PIEPS लाई सम्पर्क गर्नुहोस्। DSP ट्रान्ससीभरहरू केवल नयाँ हार्डकेस बोक्ने प्रणालीसँग प्रयोग गर्नुपर्दछ।
यो स्वैच्छिक उत्पादन सुधार कार्यक्रमले केवल PIEPS DSP PRO, DSP PRO ICE र DSP SPORT हिमस्खलन ट्रान्ससिभरहरूलाई मात्र प्रभाव पार्दछ। कृपया तपाईंको उत्पादन कसरी पहिचान गर्ने ’bout निर्देशनहरू फेला पार्नुहोस् यहाँ.
स्वैच्छिक उत्पादन सुधार कार्यक्रमले कुनै अन्य हिमस्खलन ट्रान्सिभर वा PIEPS उत्पादन लाइनका उत्पादनलाई असर गर्दैन।
प्रत्येक प्रयोग अघि एक पूर्ण सुरक्षा र प्रदर्शन जाँच गर्न सहित PIEPS ले सबै PIEPS हिमस्खलन सुरक्षा उपकरणको प्रयोगकर्ताहरूलाई उत्पादन निर्देशनहरू नजिकबाट पालना गर्न आग्रह गर्दछ।
यदि तपाईंसँग थप प्रश्नहरू छन् भने, कृपया हामीलाई सीधा सम्पर्क गर्नुहोस् वा हाम्रो FAQ सेक्सन प्रयोग गर्नुहोस्।
नि:शुल्क विनिमय सेवा
हामीले हाम्रा उत्पादनहरूलाई आवश्यक मापदण्डहरू भन्दा सुरक्षित बनाउनको लागि समाधानमा काम गरेका छौं।
विनिमय सेवा प्रक्रिया शुरु गर्न कृपया तलको फारम भर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई ईमेल मार्फत थप निर्देशनहरूको साथ प्रतिक्रिया दिनेछौं।
तपाईंको सम्पर्क विवरणहरू र शिपिंग जानकारी प्रदान गर्नाले प्रक्रियाको गति बढ्नेछ र विनिमय प्रक्रियाको अवधिमा स्थिति अद्यावधिकसँग तपाईंलाई सूचित गर्न हामीलाई अनुमति दिन्छ।
नयाँ हार्नेस प्रणालीको डेलिभरीले कच्चा पदार्थको अभावका कारण अपेक्षित भन्दा बढी लिन सक्दछ र COVID-19 महामारीको कारण यातायात ढिलाइ हुन्छ। कृपया निश्चित हुनुहोस् कि हामी समयसापेक्ष व्यवहारमा हरेक सोधपुछसँग सम्झौता गर्न हाम्रो सर्वोत्तम प्रयास गर्नेछौं।
युरोप, APAC, ल्याटिन अमेरिकाको लागि मार्च3गते देखि प्रभावाकारी – उत्तर अमेरिकाको लागि हामी अमेरिकी निकायहरू र ASAP सँग क्रमबद्ध गर्दा हामीले फलोअप गर्नेछौं
बढ्दो अनुरोधहरूको मात्रले गर्दा, प्रशोधन गर्नको लागि 10-15 कार्य दिनहरू लाग्छ ।
विनिमय प्रक्रिया युरोप
एउटा तस्वीर अपलोड गर्नुहोस्। फाइल किसिमहरू: gif, png, jpg, jpeg। अधिकतम फाइल साइज 2mb
यो फारमको प्रयोग गरेर तपाईं यो वेबसाइटद्वारा तपाईंको डाटाको भण्डारण र ह्यान्डलिंग गर्नको लागि सहमत हुनुहुन्छ।*
विनिमय प्रक्रिया संयुक्त राज्य
विनिमय प्रक्रिया न्यूजिल्याण्ड, जापान
मेल सपोर्ट NZ
मेल सपोर्ट जापान
स्वैच्छिक उत्पादन सुधार कार्यक्रमले PIEPS DSP PRO, DSP PRO ICE र DSP SPORT हिमस्खलन बीकनहरूलाई प्रभावित गर्दछ।
स्वैच्छिक उत्पादन सुधार कार्यक्रमले PIEPS बाट DSP PRO, DSP PRO ICE र DSP SPORT लाई प्रभावित गर्दछ।
हामी सोध्छौं कि निम्न उत्पादनहरूको लागि सबै नियोप्रीन बोक्ने प्रणालीहरू नयाँ हार्डकेस बोक्ने प्रणालीको साथ प्रतिस्थापन गर्नुहोस्।
ट्रान्सीभरको नाम तपाईंको उत्पादनको अगाडिको कभरमा छापिएको छ। ट्रान्सीभरको रंगले तपाईंको उत्पादनको पहिचान गर्नमा मद्दत गर्दछ।
हरियो फ्रन्ट कभर / पहेंलो रियर कभर / पहेंलो स्लाइडर।
यो उत्पादन एक हरीयो PIEPS वर्डमार्क लोगोसँग एक नियोप्रीन बोक्ने प्रणालीको साथ डेलिभर गरिएको थियो।
खरानी अगाडिको कभर / खरानी पछाडिको कभर / पहेंलो स्लाइडर
यो उत्पादन एक पहेंलो PIEPS वर्डमार्क लोगोसँग एक नियोप्रीन बोक्ने प्रणालीको साथ डेलिभर गरिएको थियो।
पारदर्शी कभर / पारदर्शी पछाडिको कभर / पहेंलो स्लाइडर
नयाँ हार्डकेस बोक्ने प्रणाली
स्वैच्छिक उत्पादन सुधार कार्यक्रमले PIEPS उत्पादन लाइनबाट कुनै अन्य ट्रान्सीभर बोक्ने प्रणाली वा उत्पादनलाई असर गर्दैन।
यदि तपाईंसँग थप प्रश्नहरू छन् भने, कृपया हामीलाई सिधा सम्पर्क गर्नुहोस् वा FAQ सेक्सनको प्रयोग गर्नुहोस्।
के म मेरो DSP बीकन प्रयोग गर्न जारी राख्न सक्छु?
उपभोक्ताले तत्काल प्रभावित उत्पादनहरूलाई प्रयोग गर्न रोक्नुपर्दछ र नयाँ हार्डकेस बोक्ने प्रणालीको लागि PIEPS लाई सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रभावित उत्पादनहरू केवल नयाँ हार्डकेस बोक्ने प्रणालीको साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ।
म सिरियल नम्बर कहाँ फेला पार्न सक्छू?
ब्याट्री केस खोल्नुहोस् र तपाईले ब्याट्री केसमा स्टिकरमा 12-अंकको सिरियल नम्बर भेट्टाउनुहुनेछ।
मसँग DSP बीकन छ - मैले के गर्नु आवश्यक पर्छ?
यदि तपाईं PIEPS बाट एक DSP PRO, DSP PRO ICE and DSP SPORT उत्पादनको मालिक हुनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई हाम्रो स्वैच्छिक उत्पादन सुधार कार्यक्रमको लागि मार्गनिर्देशनहरू अनुसरण गर्न र कार्यक्रममा सहभागी हुन भनेर सोध्छौं यहाँ:
यदि तपाईसँग थप प्रश्नहरू छन् भने, कृपया हामीलाई हाम्रो ग्राहक सेवा मार्फत सिधा सम्पर्क राख्नुहोस्।
संयुक्त राज्य अमेरिका/क्यानडा: dsp@pieps.com
मैले कसरी थाहा पाउने मेरो कुन DSP मोडलहरू हो?
बीकनको नाम तपाईंको ट्रान्सीभरको अगाडिको कभरमा छापिएको छ। बीकनको रङले पनि तपाईंको उत्पादनलाई पहिचान गर्न सहयोग गर्दछ।. (LINK उत्पादन)
DSP SPORT: हरियो फ्रन्ट कभर / पहेंलो रियर कभर / पहेंलो स्लाइडर। एक हरीयो PIEPS वर्डमार्क लोगोको साथ एक नियोप्रीन बोक्ने प्रणालीको साथ आपूर्ति गरिएको थियो।
DSP PRO: खरानी फ्रन्ट कभर / खरानी रियर कभर / पहेंलो स्लाइडर। एक पहेंलो PIEPS वर्डमार्क लोगोको साथ एक नियोप्रीन बोक्ने प्रणालीको साथ आपूर्ति गरिएको थियो।
DSP PRO ICE: पारदर्शी कभर / पारदर्शी रियर कभर / पहेंलो स्लाइडर। एक पहेंलो PIEPS वर्डमार्क लोगोको साथ एक नियोप्रीन बोक्ने प्रणालीको साथ आपूर्ति गरिएको थियो।
के मैले यो सेवाको लागि तिर्न आवश्यक पर्दछ?
नयाँ हार्डकेस बोक्ने प्रणालीको साथ DSP PRO, DSP PRO ICE and DSP SPORT को लागि स्वैच्छिक उत्पादन सुधार कार्यक्रम नि: शुल्क हो।
मैले आफ्नो बीकनमा मर्मत र परीक्षण कसरी गर्ने?
तपाईंको हिमस्खलन सुरक्षा उपकरण र बीकन प्रत्येक उपयोग गर्नु अघि परीक्षण गर्नुहोस्. यदि केहि भाँचिएको छ र यान्त्रिकले ठीकसँग काम गरिरहेको छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्। तपाईंको ब्याट्रि जाँच गर्नुहोस् (चुहिरहेको छैन, हराइरहेको छैन), इलेक्ट्रोनिक र आत्म-जाँच सञ्चालन गर्न तपाईंको बीकन “अन” स्विच गर्नुहोस्।
यदि तपाईंसँग तपाईंको उत्पादन कार्यक्षमताको ’boutमा कुनै चासोहरू छ भने, एक सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस् वा PIEPS लाई एक उपकरण सेवाको लागि पठाउनुहोस्। यदि तपाईंसँग यसको ’boutमा कुनै चिन्ता छ भने आफ्नो सुरक्षा उत्पादनको उपयोग नगर्नुहोस्। PIEPS SERVICE को लागि।
जाँच गर्नुहोस् कि हरेक पटक तपाईले यसलाई स्विच गर्दा आत्म-जाँच परिणाम “OK” छ, निश्चित गर्नुहोस् कि प्रसारण स्थिति ठीकसँग लक गरिएको छ, तपाईंको शरीरमा सिफारिस गरिएको व्यबहारमा हाम्रो उत्पादन बोक्नुहोस् र अगाडि बढ्नु अघि सँधै ट्रान्सीभर समूह जाँच गर्नुहोस्।
के मैले मेरो PIEPS बीकन नियमित रुपमा जाँच गराउनुपर्छ?
प्रत्येक हिमस्खलन बीकन नियमित रुपमा (उपकरण-जाँच, हार्डवेयर-जाँच, ब्याट्री-चेक) र प्रत्येक प्रयोग गर्नु अघि जाँच गर्नुपर्छ।
यदि त्यहाँ कुनै गल्तीको कुनै संकेत छ भने, हिमस्खलन बीकनको प्रयोग नगर्नुहोस्।
यदि तपाईं आफ्नो बीकनको अवस्था ’bout निश्चित हुनुहुन्न भने, कृपया PIEPS लाई डिभाइस सेवाको लागि उत्पादन पठाउनुहोस्। PIEPS SERVICE को लागि।
PIEPS सिफारिश गर्दछ कि एक उपकरण सेवा3वर्ष प्रयोग पछि निर्माताद्वारा संचालन गरीएको छ
खरिदको मितिबाट3वर्षपछि पहिलो सेवा
खरिदको मितिबाट5वर्षपछि पहिलो सेवा
त्यसपछि वार्षिक रुपमा
PIEPS सिफारिश गर्दछ कि सबै हिमस्खलन सुरक्षा उपकरण प्रयोगकर्ताहरूले तिनीहरूको नियमित उपकरणहरूको भागको रूपमा प्रत्येक प्रयोग गर्नु अघि आफ्नो सुरक्षा उत्पादनहरूको जाँच गर्नुपर्छ।
युरोप: +43 3182 52556-0
टोलफ्रि नं. संयुक्त राज्य अमेरिका/क्यानडा: 800-775-5552